Warbixin: Dowladda iyo Al-Shabaab ma awoodaan in ay wada-hadlaan? – Kalfadhi
In Al-Shabaab lala galo wada-hadal waa soojeedin hadda soo xoogeysaneysa. Waxaa dhawr mar ku celceliyey siyaasiyiin qaarkood ku jira Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya. Hase ahaatee, Al-Shabaab diyaar ma u tahay wada-hadalkaas? Dowladdan, inkasta oo ay iyada iyo dowladihii ka horeeyeyba ka dhawaajiyeen dhawr mar, qudheedu dhab maka tahay in, haddii ay Al-Shabaab ogolaadaan wada-hadal, ay la fadhiisato, awooddana wax ka siiso?
Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud, oo xubin ka ah Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka, ayaa u sheegay Kalfadhi inuu aaminsan yahay in aysan dowladdu u taag hayn joogteynta dagaal looga awood roonaado, laguna cirib tiro Al-Shabaab, ugu dambeyntii. Intii dagaal lala soo galayey Al-Shabaab, wax ka badan 10 sano, ayuu sheegay inuu u arko in lagu fashilmay.
Xildhibaanku waxa uu, saasdaradaadeed, soojeedinayaa, in wada-hadal lala furo Al-Shabaab. “Sida ka dhacday Afgaanistaan, waxaan qabaa in lala wada-hadlo Al-Shabaab” ayuu Xildhibaan Sakariye ku yiri Kalfadhi. Isaga oo fasiraya ujeedka wada-hadalka uu ku baaqayo uu ka lahaan karo qaranka ayuu yiri “waa in la raadiyaa si kasta oo lagu heli karo amaan”.
Sababta xoojineysa ama miisaan u yeeleysa baaqaan ah in Al-Shabaab lagu dayo wada-hadal waxa ay kuwa ka hadlay ku sheegaan, qabaanna in lagu hoobtay dagaalka kooxdaas lagula jiro, oo ay ku baxday naf iyo maal fara badan, oo ay Soomaaliya u naafowday, una gashay argagax joogta ah oo maskax iyo jirba wada saameysay shacabka iyo dowladda.
Culeyska iyo xajimiga dhaqaale, ciidan, hub iyo aqooneed ee uu u baahan yahay rukumidda dagaalka ka dhanka ah Al-Shahaab darteed, waxay dad badan rumeysan yihiin iney Soomaaliya waqti aan la ogeen dhamaadkiisa ku qaadan karto dagaalka kooxdaas. Xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal (Geelle), oo isna ka tirsan Guddiga Difaaca Golaha Shacabka, ayaa ku yiri Kalfadhi “Dowladda Soomaaliya wax dagaal ah ugama jeedno, ee wada-hadal ha furto”.
Xildhibaan Geelle waxaa, isaga oo isku dayaya inuu micno u sameeyo sababta uu ugu yeerayo dowladda in ay wada-hadal la gasho Al-Shabaab, uu yiri “Dowladda Soomaaliya mataqaan dhamaadka dagaalka, waana taas niyad jabka ugu wayn”. Waxa uu sheegay in ay Soomaaliya u fiican tahay in ay garwaaqsato in ay dowladdu uga adkaan weysay Al-Shabaab dagaalka.
In aysan Dowladda Farmaajo wax dagaal ah ku qaadin Al-Shabaab mudadii 2-da sano ahayd ee ay jirtay, iyada oo ay Al-Shabaab intaas soo weerarayeen dowladda iyo shacabka, ayaa ah mid ka mid ah waxyaabaha dad badan isweydiinayaan. Tiiyoo ay jirto in ay xukuumaddiisu balan qaaday in 2-da sano ee ugu horeysay ay ku cirib tiri doonto kooxdaas.
Laakiin, su’aasho waxay tahay Al-Shabaab ma ogashahay wada-hadal. Wali, ma muujiyeen xitaa in ay wada-xaajood doonayaan? Sanatar Axmed Cabdixafiid (Bulsho) ayaa rumeysan in aysan kooxdaasi qaadan karin go’aan ay dowladda kula fadhiisanayaan. “Hogaamiyayaasha Al Shabaab waxay hoos tagaan Al-Qaacida, talana kama go’do” ayuu yiri Sanatar Bulsho. Sidaas oo kale ayuu sheegay in aysan Dowladda Soomaaliya iyaduna u qaadan karin go’aan ah in ay la bilowdo Al-Shabaab wada-xaajood nabadeed, isaga oo yiri “dowladdeeno kaligeed kum fikiri karto wada-hadal dhab ah, laakiin waxay ka sheegtaa afka uun”.
Sanatar Bulsho waxa uu sheegay in sababta uu sidaas u leeyahay ay tahay in aysan dowladdu qaadan karin go’aan aysan ku qancin Reer Galbeedka, oo ay ka hesho caawin dhaqaale, siyaasad, ciidan iyo amaan, sida uu hadalka u dhigay. Laakiin sikastaba, Xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed (Jindi) ayaa rumeysan in haddii aysan dowladdu weerareen Al-Shabaab ay ku qasban tahay in ay la heshiiso. “Mar haddii aan lala daagaalamaynin, waxaan qabaa in lala heshiiyo” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi.
W/Q: Cabdicasiis Really